Lixabiso CNC wekhaya iplastiki iindawo mveliso kunye nabathengisi | Ouzhan
Ukwenziwa kweplastiki kubandakanya izinto ezininzi ezifanelekileyo zokwenza umatshini, i-nylon (PApolyamide), i-PC (i-polycarbonate), i-ABS (i-co-polyacrylonitrile-butadiene-styrene), i-PMMA (i-plexiglass, i-poly Acrylic methyl ester), i-polytetrafluoroethylene (F-4), i-epoxy (EP ). Xa ukhetha izinto zemizobo yoyilo, iiplastikhi ezifanelekileyo zobunjineli kufuneka zikhethwe ngokwemeko yokusetyenziswa kunye neemfuno ezifanayo zeenxalenye zomatshini ze-CNC.
Iplastikhi ye-CNC Milling-Precision Plastic Milling Parts Machining Centre
Izinto eziluncedo zeOuzhan Plastic Milled Iintetho
-Iplastiki inobunzima obuphantsi kunye nobunzima bokukhanya.
Amandla aphezulu kunye nokuqina okuthe ngqo.
Uzinzo lweekhemikhali olulungileyo.
-Umbane olungileyo wombane.
-Ukunciphisa ukunciphisa ukukhuhlana, ukuxhathisa ukungqubana kunye nokuthambisa.
-Ukubumba okuhle kunye nokusebenza kwemibala.
-Iindidi zeepropathi zokukhusela umzimba kunye neekhemikhali
-Akululanga ukuhambisa ubushushu kwaye unentsebenzo elungileyo yokulondolozwa kobushushu.
-Ixabiso eliphantsi lokuvelisa.
Inkonzo yokugaya yeplastiki eyenziwe ngokwezifiso-China Shanghai CNC iplastiki yokugaya iinxalenye zomenzi
I-Ouzhan ngumzi mveliso wokudibanisa urhwebo kunye norhwebo, ukubonelela ngenkonzo enye yokujika kunye neenkonzo zokugaya umatshini. Ngokweemfuno zabathengi, High-ngqo CNC yokugaya iinxalenye zeplastiki ezinomgangatho ozinzileyo nothembekileyo zinokuqwalaselwa. La malungu omatshini enziwa kusetyenziswa eyona mveliso ikumgangatho ophezulu, efunyanwa kubathengisi abaziwayo beemarike. Iqela lethu lobuchwephesha elinamandla kunye nobuchule kunye nolawulo olufanelekileyo kunye nenkqubo yokusebenza inokuqinisekisa ukwenziwa ngokugqibeleleyo kwezahlulo zomatshini weplastiki. Ukongeza, iimveliso zeplastiki ezisikiweyo ze-CNC zibonelela ngokungqinelana nemigangatho esemgangathweni kwaye zinokusetyenziswa kwizicelo ezahlukeneyo zeshishini. Kwaye sinokubonelela ngexabiso lokukhuphisana ngeemveliso zeplastiki ze-CNC zokugaya abathengi bethu abaxabisekileyo.
Iimpawu zeeplastiki zokugaya zeplastiki ze-Ouzhan
Izinto ezisetyenziselwa umsebenzi ochanekileyo oveliswe kwizityalo ezisebenza ngoomatshini ze-CNC zahlulwe zangamacandelo amabini: isinyithi kunye neeplastiki zobunjineli. Izinyithi zibandakanya i-aluminium alloy, isinyithi, ubhedu, ii-alloys ezahlukeneyo, njl njl.
Izinto eziluncedo Ouzhan Plastic Milling Service
-Zonke iimveliso zeplastikhi ezichanekileyo ze-CNC ziphantsi kovavanyo olungqongqo lomgangatho.
- Ngokutsho imizobo okanye iisampuli ngqo zeplastiki yokugaya iindawo mveliso.
Egqithileyo I-OEM yekhabhoni yentsimbi yokugaya izixhobo zokwenza izinto
Okulandelayo: CNC ukujika iindawo
Elungiselelweyo iindawo yokugaya steel stainless.
Elungiselelweyo iindawo carbon steel yokugaya processin ...